Guddiga Doorashada Somaliland oo ku dhawaaqey Guusha Muuse Biixi Cabdi – PuntlandNews24
Guddiga Doorashada Somaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqey natiijada doorashadii dhacdey 13 Nofeembar ee loogu tartamey Madaxweynaha Somaliland.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Somaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame ayaa ku dhawaaqey natiijada, waxaana natiijadu noqotey codad ka yar dadkii markii hore is diiwaan geliyey oo kor u dhaafayey 700 000 oo kun oo cod.
Xisbiga Kulmiye ayaa helay 305 909 kun oo cod u dhiganta 55% codadkii ladhiibtey
Xisbiga Waddani ayaa ku soo xigey oo helay 22 6092 cod oo u dhiganta 41%
Xisbiga UCID ayaan helin codad badan waxaana uu dhaafi waayey 23 241 cod oo keliya oo u dhiganta 4%.
Goobta natiijada looga dhawaaqayey waxaa ku sugnaa Xisbiga Kulmiye oo keliya, waxaan imaan labada xisbi ee kale ee tartamey, mana jirto wax saxiix ah oo ay siiyeen, inkasta oo Faysal Cali Waraabe soo dhaweeyey natiijada.
Natiijada waxaa qaadacay Xisbiga Waddani waxaana ay sheegeen in doorashada lagu shubtey oo aysan ahayn xalaal waxa ka soo baxay.
Muuse Biixi Cabdi ayaa isu diyaarinaya in uu noqdo Madaxweynihii shanaad ee Somaliland.
Musharixii Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Cirro ayaa shir degdeg ah isugu yeedhay hoggaamiyaasha xibigiisa, waxaana ay ka tashanayaan jawaabta ay ka bixinayaan natiijada guddiga doorashadu ku dhawaaqey.